विश्वमा बालबालिका कम, हजुरबा/हजुरआमा यसरी बढ्दै, के होला समाजमा यसको असर ? » RealPati.com
विश्वमा बालबालिका कम, हजुरबा/हजुरआमा यसरी बढ्दै, के होला समाजमा यसको असर ?
भनिन्छ कि आजका बालबालिका नै देशका भविष्य हुन् तर यदि बच्चा नहुने हो भने कुनै देशको भविष्य खतरामा पर्न सक्दछ । यस्तै खतराको संकेत दिनेतर्फ इशारा गर्ने एउटा शोध सार्वजनिक भएको छ। जसका अनुसार महिलाहरुको प्रजनन क्षमता दरका कमी आएको छ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार यो शोधको परिणाम आश्चर्यमा पार्ने खालको छ। यसको परिणाम समाजमा गम्भीर हुन सक्दछ, जहाँ बालबालिकाभन्दा बढी हजुरबा हजुरआमा हुनेछन्।
शोधमा आधारित रिपोर्टका अनुसार प्रजनन दर कम हुनुको अर्थ आधाभन्दा बढी देशमा जन्मदरको अस्थायीरुपमा कम हुनु हो । यसको अर्थ यही हुनेछ कि यी देशमा उनीहरुको आवादीको विस्तार कायम राख्नका लागि पर्याप्त मात्रामा बालबालिका छैनन् ।
‘द लांसेट’मा प्रकाशित यो अध्ययनमा हरेक देशमा सन् १९५० देखि २०१७ को बिचको ट्रेन्डमा दृष्टि राखियो । सन् १९५० मा महिलाहरु आफ्नो पूरा जीवनकालमा औषतन ४.७ सन्तान जन्माउने गर्दथे । तर गत वर्षसम्म यो प्रजनन दर आधा भएर २.४ बच्चामा आएको छ।
यद्यपि अलग अलग देशका अनुसार यसमा निकै अन्तर देख्न पाइन्छ । नाइजर र पश्चिम अफ्रिकामा प्रजनन दर ७.१ छ, तर साइप्रसको भूमध्य द्वीपमा महिलाहरुको औषतन एकै बच्चा जन्माउने गर्दछन् ।
कति हुनुपर्दछ प्रजनन दर ?
जब कुनै देशमा प्रजनन दर २.१ भन्दा तल आउँछ तब जनसंख्या खुम्चन सुरु हुन्छ । विशेषगरी त िदेशमा जहाँ बाल मृत्युदर बढी छ । १९५० मा जब यो अध्ययन सुरु भयो तब कुनै पनि देश यो श्रेणीमा थिएन।
युनिभर्सिटी अफ वाशिंगटनमा इन्स्टिच्युट फेर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्युल्युशनका निर्देशक प्राध्यापक क्रिस्टफर मुरैले बीबीसीसँग भने–हामी त्यो स्थितिमा पुगेका छौ, जब प्रजनन दर रिप्लेसमेन्ट लेवलभन्दा तल छ । त्यसैले यदि केही गरिएन भने त ती देशहरुमा जनसंख्या कम हुनेछ । यो ठुलो परिवर्तन हो ।
कुन देश बढी प्रभावित ?
आर्थिक रुपले विकसित देश जस्तै युरोप, अमेरिका, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया आदि देशमा प्रजनन दर कम छ। यसको यो अर्थ होइन कि यी देशमा रहेका मानिसहरुको संख्या कम भइरहेको छ, कम्तीमा पनि अहिलेसम्म त त्यस्तो छैन । किनभने यहाँ जनसंख्याको आकार प्रजनन दर, मृत्युदर र प्रवासनको मिश्रण हुन्छ ।
यद्यपि प्रजनन दरमा कमीको असर तत्कालै बढी पर्ने छैन । यसका लागि पिढियौसम्म लगातार परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । तर प्राध्यापक मुरै भन्छन्–हामी चाँडै नै त्यो स्थितिमा पुग्नेछौ, जहाँ समाज जनसंख्याको कमीसँग जुझिरहेको हुनेछ ।
आधाभन्दा बढी देशमा पर्याप्त बच्चाको जन्म भइरहेको छ । तर देश जति आर्थिक रुपले विकसित हुन्छ, त्यति नै प्रजनन दरमा कमी हुन्छ।
प्रजनन दरमा कमीको कारण
प्रजनन दरमा कमी हुनेको कारण स्पर्म काउन्ट कम हुनु मात्रै होइन् वा कुनै यस्तो सामान्य कुरा होइन, जुन दिमागमा सबैभन्दा पहिला आउँछ । बरु यसका तीन मुख्य कारण छन्ः
–बाल्यकालमा कम मृत्युको अर्थ हो कि महिलाहरुमा कम बच्चा हुनु ।
–गर्भनिरोधकसम्म बढी पहुँच ।
–शिक्षा र रोजगारीमा बढी महिलाहरु हुनु ।
प्रजनन दर कम हुनुलाई कयौ अर्थमा सफलता पनि मान्न सकिन्छ ।
देशमा यसको असर
रिपोर्टका अनुसार यसबाट प्रभावित देशहरुले प्रवासन बढाउने विषयमा विचार गर्नु आवश्यक हुनेछ । यद्यपि उसको आफ्नो समस्या हुन सक्दछ । यसका साथै उनीहरुले महिलाहरुलाई बढी बच्चा जन्माउनका लागि प्रेरित गर्नुपर्नेछ । जुन अक्सर सम्भव नहुन सक्छ ।
रिपोर्टका लेखक प्रध्यापक मुरै भन्छन्–वर्तमान रुझानका अनुसार देशहरुमा निकै कम बच्चा हुनेछन् र जनसंख्यामा टछ वर्षभन्दा कम उमेरका बढी मानिस रहनेछन् । यसबाट विश्व समाजलाई कायमै राख्न निकै कठिन हुनेछ ।
‘यस्तो समाजको गहन सामाजिक र आर्थिक परिणामहरुका बारेमा सोच्नु जरुरी छ जहाँ बालबालिका कम र हजुरबा, हजुरआमा बढी छन् ।’
जापान यो मामिलामा अधिक जागरुक छ, उसको जनसंख्या कम भइरहेको छ तर मलाई लाग्दैन कि पश्चिमी देश यसबाट बढी प्रभावित हुने छैनन् । किनभने प्रजनन दरको प्रवासनबाट भरपाई हुनेछ । यद्यपि मानव जातिलाई यसबाट फाइदा पनि हुन सक्दछ । जेम्स गैलहर, स्वास्थ्य एवं विज्ञान संवाददाता, बीबीसी न्यूज़, बीबीसी हिन्दीबाट
प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता हुँदै